चिनियाँ अध्ययन भन्छः दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल खानी छ - Nepali in Australia
चिनियाँ अध्ययन भन्छः दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल खानी छ
September 10, 2021 autherLeaveaComment on चिनियाँ अध्ययन भन्छः दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल खानी छ
दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि भएको छ। नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिएको सेस्मिक सर्भेको प्रतिवेदनले दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको हो।
चिनियाँ प्राविधिक टोलीले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनमा यहाँ ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको बताइएको छ। चिनियाँ टोलीले प्रतिवेदन पठाएपछि उत्खननका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका भूगर्भविद् डा. सुधीर रजौरेले बताए।
“सर्भे गरिएको स्थानमा ग्यास र पेट्रोल छ भन्ने प्रमाणित भयो”, उनले भने, “अब कुन भू–भागमा कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्याँस छ भनेर अन्तिम सर्भे हुनेछ।” को’रोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै विज्ञ तथा प्राविधिकको टोलीलाई चीन सरकारले आउने अनुमति दिएको छैन।
अहिले विज्ञ टोली चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयको अनुमति कुरेर बसेको उनको भनाइ छ। “चारवटा क्षेत्रमा गरिएको सर्भेको नतिजा सकारात्मक देखिएको छ”, उनले भने, “टोली आउनासाथ धमाधम काम सुरु हुन्छ।” दुबै देशका सरकारबीच जीटुजी सम्झौताअनुसार काम सुरु भएकाले यसलाई निरन्तरता पाउने विभागले जनाएको छ।
“विस्तृत सर्भे र ड्रिलिङको काम पनि अहिलेसम्म सकिन्थ्यो होला”, भूगर्भविद् डा. रजौरेले भने, “को-भि’डका कारण झन्डै डेढ वर्ष अन्वेषणको काममा ढिलाइ भएको छ।” दैलेखका विभिन्न ठाउँमा २०७६ असोजदेखि अ’न्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो।
विभागले श्रीस्थान, पादुका, को’टिला, दैलेख बजार तथा कर्णाली राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा ड्रिलिङको काम सकिएको जनाएको छ। करिब १० वर्षअघि पनि दैलेखमा बलेको ग्याँसकै कारण नेपालको कुनै भू–भागमा पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्छ भन्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालका विभिन्न १० वटा जिल्लामा अन्वेषण सुरु गरेका थिए।
विभिन्न कारणले अन्वेषणका काम हुन नसकेपछि सरकारले सम्झौता रद्द गरेर चीनसँग नयाँ सम्झौता गरेको थियो। तत्कालीन समयमा ७२ लाख बढी अमेरिकी डलर खर्च गरिएको खानी तथा भूगर्भ विभागको तत्थ्याङ्कमा उल्लेख छ। अन्वेषणको अन्तिम चरणमा जमिनमुनि चार हजार ५०० मिटर गहिरो ड्रिलिङ गरिने भएको छ।
विभागले दिएको जानकारीअनुसार यही ड्रिलिङपछि मात्र कति परिमाणमा ग्याँस वा पेट्रोल छ भनेर थाहा हुनेछ। यो काम पहिलो सर्भे गरिएको कुनै स्थानभित्र हुनसक्छ, अहिले स्थान भन्न मिल्दैन खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। अन्वेषणको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने दैलेखको कुनै भूभागभित्र ग्याँस वा पेट्रोल छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिने देखिएको हो।
नेपाल र चीन सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थको उ’त्खननका लागि सन् २०१७ मा सम्झौता गरेको थियो। सोहीअनुसार विभिन्न चरणमा काम सुरु भइरहेका छन्। विभागका अनुसार काम सुरु भइरहेकै बेलामा को’रोना सङ्क्रमणको दर बढेपछि केही स’मस्या भएको छ।
अन्तिम सर्वेक्षणका लागि प्राविधिक टोली र आवश्यक उपकरण ल्याउन समयमै सकिएको भए अहिलेसम्म अन्तिम नतिजा पनि आइसक्थ्यो। को-भि’ड सङ्क्रमणकै कारण झण्डै १८ महिना अन्वेषणको काममा ढि’लाइ भएको छ। रासस
एमसीसी टोलीलाई माधव नेपालको जवाफ- राष्ट्र हितविरुद्धको अनुदान हामीलाई चाहिँदैन
कस्तो अचम्म ! कुखुराको भाले मर्दा यसरी गरियो दाहसंस्कार ,गरियो काजकिरिया (हेर्नुस् भिडियो )
August 3, 2021 auther
March 21, 2021 auther
यी हुन् साहसी युवती सारा : जो काठमाडौंदेखि उपर मुस्ताङसम्म स्कुटरमा पुगिन (भिडियो सहित)
March 17, 2021 auther